Japana: Lany tany Ishikawa ny fandrarana ny kilonga tsy hitondra finday · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2009 20:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Português, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Sambany, lany tamin'ny 29 jona tao amin'ny prefekitioran'i Ishikawa (500 km/315 maily avaratr'i Tokyo) ny lalàna mametra ny fampiasana finday ho an'ny zaza sy ny kilonga hiditra amin'ny fahatanorana , naresaka tao amin'ny tontolom-bolongana ny adihevitra amin'izay sahaza sy tsy sahaza ny kilonga sy ny resaka fiantsoana finday. Hita ao amin'ny andininy faha-33n'ny “Lalàna mikasika kilonga eto Ishikawa” [ja, pdf] fa “Tsy maintsy miezaka ny hanakana ny kilonga any amin'ny fanabeazana fototra, ambaratonga faharoa fototra, ary any amin'ny fanampim-pianarana tsy hampiasa finday ny mpiambina afa-tsy amin'ny fampilazana mialoha loza ho avy, na heloka bevava mety hitranga na antony hafa manokana.” Hihatra ity lalàna vaovao ity manomboka ny voalohan'ny Janoary 2010.
Misalasala ny amin'ny hahatontosa ny fampiharana ity fitsipika ity i Chuei ao amin'ny Mainichi Blog .
Mahasahy manao fanamby aho fa tsy hisy ray aman-dreny hanafoana ny fananan'ny ankizy finday noho io. Nahoana no asiana lalàna amin'ny antso finday nefa efa afa-mandefa mailaka sy miserasera na amin'ny finday na amin'ny solosaina? Sarotra ny mino fa noho ny resaka antso am-pinday no anton'ity lalàna ity. Tsy manantena loatra ny hisian'ny vokatra amin'io lalàna io tahaka ny tamin'ny fanerena hametrahana fanairana fahamaizana ny trano aho satria tsy misy ny fanasaziana manokana na onitra aloa. Angamba azo ampiasaina ity lalàna ity indray andro any raha misy toe-draharaha mifandraika amin'ny finday sy sekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa fototra izay ahafahan'ny prefektiora miala andraikitra, (i.e. tsy misy andraikitry ny sekoly).
Manolo-kevitra i Usagi Inu ao amin'ny Manya Hompo fa ny fampiasana finday mametraka fahana mialoha no vahaolana.
Mieritreritra aho fa ny fanaovana tolotra finday ampidirana fahana mialoha tsy misy fidirana aterineto no vahaolana. Rehefa tsy afa-mihoatra ny fetran'ny fampiasana azy ianao dia ahafahana misoroka ny fampiasana azy tafahoatra izay. Na izany aza efa miova ny toetr'andro ka sarotra ho an'ny ray aman-dreny ny handoa vola ny findain'ny ankizy mandritra ny fitotongan'ny toe-karena. Tsy nisy finday nandritra ny fahazazako. Tsy maintsy nitady sofindavitra andoavam-bola aho rehefa te-hantso ny ray aman-dreniko. Ankehitriny, sarotra ny ahitana ny misy sofindavitra andoavam-bola ka tsy azo ialàna ny manome finday ny kilonga.
Malahelo noho ity lalàna ity ny Mpikambana mifindrafindra misolovava #1 ny SATT izay manome tolotra kojakojam-pianarana an-tserasera.
Raha rarànao hatramin'ny fananana finday, dia mamono fahafaha-manatratra tajona tahaka ny fampidirana ny finday ho ao anatin'ny curriculum-n'ny fampianaram-bahoaka.
Nampiany fa tokony tany amin'ny mety ho azo atao no nifantohan'ny mpanao lalàna fa tsy tany amin'ny famerana.
Satria manko efa malaza dia malaza eto Japana ny finday ary efa zavakanto mahazo vahana manerantany ny teknolojia, ka tafiditra amin'izany ny fivezivezem-baovao, dia faniriako raha mba any amin'ny hoe I wish they would have focused on a possibility of “inona no azontsika ampiasaina amin'ity,” no ifantohan'izy ireo kokoa fa tsy any amin'ny “famerana an'ity.”
Tsy azon'ity ray manan-janaka mirahalahy antsoina hoe Kimme ity ny antony ilàn'ny kilonga finday mialoha be.
Nahazo ny findainy voalohany ny lahimatoako rehefa hankany amin'ny Lisea izy. Nomenay finday ampidirana fahana mialoha kosa ny zandriny, saingy tsy dia be loatra ny fahafaha-manaon'ilay kazaram-pinday tahaka ny tsy ahafahany miserasera an'aterineto ohatra. Mino aho fa mahavidy izay karazam-pinday tiany ry zareo rehefa manana asa an-tselika sady mahaloa izay laniny rahateo. Fa tsy misy ilàn'ny any amin'ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa ireny mihitsy. Tsy nanana eritreritra ny hanome finday ny kilonga mbola kely loatra ao amin'ny fianakavianay izahay na dia talohan'ny nivoahan'io lalàna io aza.
Azoko eritreretina anefa fa matoa navoaka ny lalàna tahaka izao dia betsaka izany ny kilonga no mikarataka ny hanana finday ho azy.
Tsy azoko ny dikan'ny hoe manana finday entina misoroka izay mety hisian'ny fanaovan-keloka. Eny, mety hanampy ny finday raha very izy ireo. Angamba mety hanampy ny finday raha misy maka an-keriny ny kilonga. Na angamba koa ho tonga any an-trano izy ireo amin'ny folo ora alina aorian'ny “fanaovana cours d'appui”.
Fa heveriko kosa fa diso ny fiaraha-monina raha voatery hitondra finday ny kilonga hisorohana izay fanaovan-dratsy mety hihatra aminy.
Mifamadika amin'izany ary, moa ve tsy voaeritreritrao fa mampidi-doza kokoa ny fanomezana finday ny kilonga any amin'ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa?
Soratra miverina: Global Voices teny Malagasy » Japana: Lany tany Ishikawa ny … さらいげつ
[…] original here: Global Voices teny Malagasy » Japana: Lany tany Ishikawa ny … Tags: eyes, mamoru-says, new-type, your-eyes, さらさら, さん Life Is Too Short: New […]
04 Janoary 2010, 21:11